Intsebenziswano - Wikipedia
Intsebenziswano kuxa abantu besebenza bebonke ukwenza ngcono ubomi babo, nangona besenokuzikhethela ngokukhululekileyo ukungasebenzi nabanye abantu, Kananjalo bafumana imali encinance xa besebenza bebonke.
Intsebenziswano luhlobo lombutho olusetyenziswa ngabantu ukuze ubomi babo bube ngcono. umbutho wokuqala yivenkile eseRochdale, eNgilane nowaqala ngo-1844. Abantu abawuqalayo babefuna ukutya okwakuphantsi ngexabiso kwaye kukwizinga elingcono. Ukusukela ngoko, abantu baafumana iindlela ezininzi zokusebenzisana. Umzekelo:
amafama eza neenqwelo zawo ezekuthengisa ukuze bafumane amaxabiso angcono ngombona wawo.
amahlwempu ayazikhusela kwabo baboleka imali nabasebenzi bayayigcinela umhlala phantsi imali yabo (credit union)s,
Abalobo beentlanzi bayazipakisha iintlanzi zabo ukuze bafumane ixabiso elingcono, kwaye
Abahlali bazifumanela umbane okanye amanzi.
Imibutho yentsebenziswano yimibutho yoluntu ngokubanzi kuba abanikazi bayo ngabantu abayisebenzisayo. Imibutho yentsebenziswano inceda abantu ukuba bakwazi ukumelana nobucapitalism. I-International Cooperative Alliance yaaqala ngo-1885. Inika ingxelo yokokuba kukho izigidi-gidi ezingama-800 zamalungu emibutho yentsebenziswano kwihlabathi jikelele.
I-Rochdale - Unxibelelwano ngendawo yokuzalwa
Ubudlelwane ngonxibelelwano kuzwelonke/ Iqhina lentsebenziswano kazwelonke
Last edited on 27 EyeSilimela 2016, at 08:32
Eli khasi lagqityelwa ukulungiswa kwi-27 EyeSilimela 2016, kwi-08:32